Vakadzivirira zvizere vatorwa vanogona kupinda muUS kutanga munaNovember 8
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Vakadzivirira zvizere vatorwa vanogona kupinda muUS kutanga munaNovember 8
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Vakadzi vakazara vakabaiwa vanogona kupinda muUS kutanga munaNovember 8.
Mishonga yekudzivirira hutachiona yeCOVID-19 yakabvumidzwa neWorld Health Organisation (WHO) iyo isingashandiswe kana kupihwa mvumo muUS ichazivikanwa senzira yekumiririra, ichipa mwenje weiyo UK-yakagadzirwa AstraZeneca, pamwe neChina Sinopharm neSinovac.
US irikusimudza zvirambidzo zvekufamba kune vashanyi vekunze avo vakabaiwa jekiseni kuzorwa neCOVID-19.
Vafambi vekunze vakabaiwa zvakakwana COVID-19 vachabvumidzwa kupinda muUS kutanga muna Mbudzi 8
Mutemo mutsva weUS unotungamirwa nehutano hweveruzhinji, hwakaomarara, uye husingachinji, anodaro White House.
White House yazivisa nhasi kusimudzwa kwezvibvumirano zveCOVID-19 zvekufamba, uye ndokuti vafambi vese vekunze vakakwenenzverwa hutachiona hwecoronona vachabvumidzwa kupinda muUnited States kubva munaNovember 8.
Mutevedzeri wemunyori wenhau muWhite House, Kevin Munoz asimbisa nhasi kuti "mutemo weUS wekufamba mutsva unoda kuti vachengeti vekunze vanoenda kuUnited States vatange nhomba musi waNovember 8."
VaMunoz vakatumirawo paTwitter kuti mutemo uyu "unotungamirwa nehutano hweveruzhinji, hwakaomarara, uye husingachinji."
Yakasimba Kurambidzwa kwekufamba kweUSs yakachengetedza mamirioni evashanyi vanobva kuChina, Canada, Mexico, India, Brazil, vazhinji veEurope kubva muUnited States, vakaremara kushanya kweUS, uye vakakuvadza miganhu yenharaunda.
Mwedzi wapera, iyo White House yakati ichasimudza zvirambidzo kune vanofamba nendege kubva munyika dzinopfuura makumi matatu, kusanganisira China, India, Iran, uye vazhinji veEurope kubva kutanga kwaNovember, asi zvakamira pakupa zuva chairo.
Musi weChipiri, US Vakuru vakati nyika ichasimudza zvirango zvekufamba pamiganhu yayo yepasi uye kuyambuka ngarava neCanada neMexico kune avo vakabaiwa zvakakwana.
Mishonga yokudzivirira COVID-19 inogamuchirwa ne World Health Organization (WHO) izvo zvisina kushandiswa kana kupihwa mvumo muUS zvinozikanwa senzira inoshanda yekubaya inoculation, zvichipa mwenje wegreen weiyo UK-yakagadzirwa AstraZeneca, pamwe neChina Sinopharm neSinovac.
Canada yakavhurazve muganho wayo wepasi neUS kutanga kwaNyamavhuvhu kuti vabaye vanhu vemuAmerica zvizere neiyo yakaipa COVID-19 bvunzo yekufamba kusingakoshe. Kushaikwa kwekudzoserwa kubva kumuvakidzani wayo, zvisinei, kwakakwevera zvichemo kubva kuvakuru veCanada.
Kurambidzwa kwenhamba huru yevanhu vasiri vemuUS vanopinda muAmerica kwave kumanikidzwa kwemwedzi inopfuura gumi nesere nekuda kwechirwere checoronavirus. Vaimbove Mutungamiri Donald Trump vakatanga kurambidza vafambi vemhepo kubva kuChina kutanga kwegore ra18, ndokuzowedzera ichi chibvumirano kunzvimbo zhinji dzeEurope.
US Travel Association yakaburitsa chirevo chinotevera pachiziviso chekuti US ichavhura zviri pamutemo miganho yayo kune vaccinent vafambi vekunze munaNovember 8:
"US Travel yagara ichidaidzira kuti miganho yedu ivhurwe zvakachengeteka, uye tinogashira chiziviso chehutungamiriri hweBiden chezuva rakatarwa rekugamuchira zvakare vafambi vekunze vakabaiwa majekiseni.
“Zuva iri rakakosha zvakakosha pakuronga - kwendege, kumabhizinesi anotsigirwa nerwendo, uye kumamiriyoni evashanyi pasi rese avo vava kuzofambisa hurongwa hwekushanyira United States zvakare. Kuvhurazve vashanyi vekunze kuchapa hunyanzvi kuhupfumi uye nekukurumidza kudzoka kwemabasa ane chekuita nekufamba ayo akarasika nekuda kwekurambidzwa kwekufamba.
"Tinorumbidza hutungamiri nekucherechedza kukosha kwekufamba kwenyika kune hupfumi hwedu nenyika yedu, uye nekushandira kuvhura miganho yedu zvakachengeteka uye kubatanidza America nenyika."